Myanmar Journal Download | B4Ucollections
စာပေအမျိုးအစားထဲမှာ Biography အမျိုးအစားကို အချို့က နှစ်သက်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျနော်လဲ ပါတယ်
အခုဆို Biography အမျိုးအစား စာအုပ်တွေကို ကျနော် လုပ်လာခဲ့တာဆိုရင် ဦးဖေမောင်တင်၊ စစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်း၊ ဆရာပါရဂူရဲ့ ပဉှာကထာ၊ ဟိုချီမင်း၊ ချေဂွေဗာရာ၊ ခရစ်(စ)တီယန်ဘားနဒ်၊ ဒဂုန်တာရာ ရုပ်ပုံလွှာ၊ အရင်ဧကရာဇ် အခုလူ၊ ကျွန်တော် မစ္စတာဘားမား၊ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်၊ ကိုစောညိန်း၊ သခင်သန်းထွန်း နောက်ဆုံးနေ့များ၊ ပဏ္ဍိတကထာ၊ ထူးအိမ်သင်၊ စိုင်းထီးဆိုင် ...။ နည်းတာတော့ မနည်းတော့ဘူး ဆိုရမှာပါပဲ။ အခုလဲ နောက်ထပ် တစ်အုပ် လာပါပြီ။
ဒီဆိုင်းဆရာကြီးကို ဘယ်မှာ စပြီး သတိထားမိသလဲဆိုရင် ဆရာတော် ဦးဆေကိန္ဒတို့ ဆရာချစ်ဦးညိုတို့ ဦးစီးပြီး ရိုက်တဲ့ “ဘိသိက်ပြိုင်” ဇာတ်ကားကို ကြည့်မိပြီး သတိထားမိတာပါပဲ။ ဆိုင်းဆရာကြီးဆိုပေမယ့် စာရေးကောင်းတဲ့ ဆရာတစ်ဦးပါပဲလားပေါ့။ ဒါတင် ဘယ်ကဦးမလဲ နာမည်ကျော် “ထန်းရွက်ပုတီး” သီချင်းကိုလဲ ဒီဆရာကြီးပဲ ရေးသွားခဲ့တာ။ အဲဒီလို သိပြီးကတည်းက ရွာစားကြီး စိန်တင်ဟန်ကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။
၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီလလောက်က စာအုပ် ထွက်ထွက်ချင်း ဝယ်ဖြစ်တယ်။ စိတ်ဝင်စားမိတာကိုနော့။ သူ့ဘဝအကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင် မှတ်စုစာအုပ်လေးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာ သိပ်မြတ်နိုးဖို့ကောင်းတယ်။ စာအုပ်က သူကွယ်လွန်ပြီး အတော်ကြီး ကြာမှ ထွက်လာခဲ့တာ။
ကျနော် ပြောရဲပါတယ်။ စာဖတ် ပရိသတ်တွေထဲက စာအုပ်ဆိုင်တွေကို မွှေနှောက်ပြီး ဘယ်စာအုပ် အသစ်ထွက်သလဲ ဆိုတာလိုက်ကြည့်နေတတ်တဲ့ သူတွေ ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ကောက်ကျသွားပြီလို့။ ရွာစားစိန်တင်ဟန်ရဲ့ “ဆိုင်းသမား” စာအုပ်ကို တွေ့မိလိုက်ကြပါသလား။ အဲဒါ စာအုပ်လုပ်ပြီး ကျနော်က ကြွားပါတယ်။
Credit to Nyisay Myanmar EbookPosted4days, 18 hours agoView this post on Facebook သင်္ခါ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးဒီးဒုတ်ဦးဘချို
Credit to burmeseclassicPosted 1 week,4days agoView this post on Facebook မလေးလုံ ဖေမောင်တင်(သို့)ဘသက်ရှည်
အရင်တုန်းကတော့ စာအုပ်ထူကြီး နှစ်အုပ်အဖြစ်နဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးတယ်။ အခုကတော့ နှစ်အုပ်ကို ပြန်ပေါင်းပြီး စာရွက်သားကောင်းကောင်း အပြင်အဆင်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြန်လည် ထုတ်ဝေထားပါတယ်။
အတော့်ကို ဖတ်လို့ကောင်းပြီး ရသဟန် အပြည့်ပါတဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ကောင်းကြီး တစ်အုပ်ပါ။ တစ်ချိန်တုန်းက ပထမတွဲကို ဖတ်မိပြီး ဆက်ဖတ်ဖို့ ဒုတိယတွဲ ရှာမရခဲ့တာနဲ့ စိတ်ထဲ တသသ ဖြစ်ခဲ့ရဖူးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုလဲ မမှားပါဘူး။
ဒီစာအုပ်ကို ကျနော့်လို အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ပြီး ဆက်လက်ဖတ်ရှုဖို့ ရှာဖွေနေတဲ့ သူအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Credit to Nyisay Myanmar EbookPosted 1 week,5days agoView this post on Facebook B4Ucollections likesastatus.Posted2weeks ago ဂမ္ဘီရလောက_2014Dec
Credit to burmeseclassicPosted2weeks,6days agoView this post on Facebook လျှို.ဝှက်ဆန်းကြယ်_2014Dec
Credit to burmeseclassicPosted2weeks,6days agoView this post on Facebook ပါရဂူ နိဗ္ဗာန်
Credit to burmeseclassicPosted4weeks agoView this post on Facebook ပါရဂူ ဝေဒနာ
Credit to linhtet.comPosted4weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections shared သက်ရှည်ကျန်းမာ's photo.Posted 1 month agoView this post on Facebook ဆရာနု အမေ့သားနှင့်အခြားဆောင်းပါးဝတ္ထုတိုများ
Credit to burmeseclassicPosted 1 month agoView this post on Facebook မောင်ရွှေခေတ် အကယ်ဒမီ ရုပ်ရှင်မင်းသား ဒါရိုက်တာ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ကိုကျော်သူ
Credit to burmeseclassicPosted 1 month agoView this post on Facebook မြတ်သက် အိမ်မက်ကမ္ဘာထဲပို.ဆောင်သူဝီလျံရှိတ်စပီးယားရဲ. ဘဝဇာတ်ကြောင်း
Credit to burmeseclassicPosted 1 month agoView this post on Facebook B4Ucollections likesaphoto.Posted 1 month,2weeks ago လျှို.ဝှက်ဆန်းကြယ်_2014Nov (34MB)
Credit to burmeseclassicPosted 1 month,3weeks agoView this post on Facebook ဦးကိုလေး(ဇေယျာမောင်) ကမ္ဘာအနှံ.ဓမ္မအောင်လံစိုက်ထူနေသောဂုရုကြီးဦးဂိုအင်ကာ
Credit to burmeseclassicPosted 1 month,4weeks agoView this post on Facebook ကျော်အောင် ဘီလ်ဂိတ်ဆောက်တဲ့ဘ၀အိမ်
Credit to စာဖတ်ခန်းPosted 1 month,4weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections likesaphoto.Posted 1 month,4weeks ago B4Ucollections likesaphoto.Posted2months,2weeks ago မိုးကျော်သူ အထီးကျန်ကလဲ့စား ၁
မိုးကျော်သူ အထီးကျန်ကလဲ့စား ၂ဇာတ်သိမ်း
Credit to burmeseclassicPosted2months,2weeks agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် သိုင်းသစ္စာကိုရှာဖွေခြင်း ၁
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် သိုင်းသစ္စာကိုရှာဖွေခြင်း ၂
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် သိုင်းသစ္စာကိုရှာဖွေခြင်း ၃ဇာတ်သိမ်း
Credit to burmeseclassicPosted2months,2weeks agoView this post on Facebook သီဟအောင် မြို.စားနှင့်ကြေးစား ၁
သီဟအောင် မြို.စားနှင့်ကြေးစား ၂ဇာတ်သိမ်း
Credit to burmeseclassicPosted2months,2weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections likesaphoto.Posted2months,3weeks ago B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.တောင်ဆိုကြလွန်းလို့ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေကြပါစေ Posted2months,4weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections likesastatus.Posted3months ago B4Ucollections likesastatus.Posted3months,2weeks ago ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ စဆုံး(၁၀) အုပ်တွဲ ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းပါ
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၁
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၂
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၃
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၄
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၅
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၆
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၇
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၈
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၉
ဘုန်းကြွယ် ကိုးသင်္ချိုင်းမှစိန်ခေါ်သံ ၁၀ ဇတ်သိမ်း
Credit to mmcpPosted3months,3weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections commented on their own photo.Posted3months,3weeks ago B4Ucollections likesastatus.Posted3months,3weeks ago သုခ(ဦးသုခ) ချယ်ရီအလှစာအလှ
Credit to burmeseclassicPosted3months,3weeks agoView this post on Facebook လင်းယုန်မောင်မောင် ကျွန်မချစ်သောစပိုင်
Credit to burmeseclassicPosted3months,3weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections likesastatus.Posted4months, 1 week ago B4Ucollections commented on their own photo.Posted4months, 1 week ago B4Ucollections commented on their own photo.Posted4months, 1 week ago မောင်မြင့်ကြွယ် မြန်မာပြည်မှနေ့ရက်များ (George Orwell  - Burmese Days)
Credit to မြန်မာစာအုပ်များPosted4months, 1 week agoView this post on Facebook မောင်မြင့်ကြွယ် ဆေးကုန်သည်
http://www.mediafire.com/download/ppgzghfygos0tdr/မောင်မြင့်ကြွယ်_ဆေးကုန်သည်.pdfPosted4months, 1 week agoView this post on Facebook မောင်မြင့်ကြွယ် ခြေရာပျောက်စစ်ဆင်ရေး
Credit to burmeseclassicPosted4months, 1 week agoView this post on Facebook မှူးသပြေ ရဲရင့်သူ၏ဓား (40.899 MB)
Credit to burmeseclassicPosted4months, 1 week agoView this post on Facebook မောင်မြင့်ကြွယ် မတန်တဆ (14.3 MB)
Credit to burmeseclassicPosted4months, 1 week agoView this post on Facebook မောင်မြင့်ကြည်(စာပေဗိမာန်) စိတ်ကူးဥာဏ်ကြောင့်ကမ္ဘာကျော်ကြသူများ (10.41MB)
Credit to burmeseclassicPosted4months, 1 week agoView this post on Facebook သူငယ်ချင်းတို.ရေ
download ဆွဲလို.မရတဲ့စာအုပ်တွေကို စာရေးဆရာနာမည်နှင့် တကွ Message box ကနေပြောပြပေးကြပါအုန်း ပြန်တင်ပေးပါမယ်
B4U Admin များPosted4months, 1 week agoView this post on Facebook B4Ucollections commented onapost.Posted4months, 1 week ago မင်းလူ သာဓု အင် ဆန်း(စ်)
Credit to မြန်မာဆိုက်ဘာမီဒီယာPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ် ဇက်တပ်ဖွဲ.
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု နွေနှောင်းလက်ကျန်
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ဥသြတွန်တဲ့လရာသီ
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု အိပ်မက်ဝတ္ထုတိုများ
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ပုံပြောကောင်းသောမိန်းကလေး
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု မိချို
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ကြေးမုံရိပ်သွင်နှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ကုသိုလ်ကြမ္မာမမီပါခဲ့
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.Posted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ပန်းများကိုပွင့်စေသူ
Credit to uploaderPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု လမင်းကြီးသာစမ်းပါ
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ဗညားရှိန်း
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ကြာတော၌ရွာသောမိုး
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ချစ်ခြင်းကိုအားပြု၍
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ချစ်လှချည်ရဲ့
Credit to burmeseclasciPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု ယောက်ကျားတို.အကြောင်း
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု လာခြင်းကောင်းသောလူကလေး
Credit to burmeseclassicPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook ခင်နှင်းယု နွားတစ်ထောင်
Credit to mmcybermediaPosted4months,2weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.ဖုန်းများတွင် Mediafire ၏ Authorized Download ကို ကျော်နိုင်မည့်နည်းလမ်း
Mediafire လင့်သည် Download လုပ်ရလွယ်ကူသဖြင့် ယခင်ကတည်းက အသုံးပြုသူများ နှစ်ခြိုက်စွာသုံးစွဲကြသည်။ သို့သော် ရံဖန်ရံခါ တွင် Authorized Download ဟူသော အနီရောင် Button ပေါ်လာသည့်အခါ ပေးထားသော စာလုံးနှစ်လုံးအား ပြန်လည်ထည့်ပေး၍ ဒေါင်းရသည်။ ၎င်းသည် ကွန်ပြူတာများတွင်သာ အဆင်ပြေပြီး Smart Phone, Tablet များတွင် အဆင်မပြေသဖြင့် အသုံးပြုသူများအခက်တွေ့ကြရသည်။ အထူးသဖြင့် ပြန်လည် ထည့်သွင်းရမည့် စာလုံးနှစ်လုံး မပေါ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖုန်းများတွင် Authorized Download ကို မပေါ်စေလိုလျှင် mediafire အကောင့် ဖွင့်ပြီး ၀င်ထားခြင်းဖြင့် Authorized Download ဆိုသည့် အနီရောင် ခလုပ်အား ကျော်ဖြတ်နိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် www.mediafire.com သို့သွားပါ။ ပြီးလျှင် Log in ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် Username တွင် [email&#160;protected] ၊Password တွင် 999999999 (9 ကိုးလုံး) အား ထည့်ပေးပြီး ၀င်ထားခြင်းဖြင့် မည်သည့် Authorized Download မျှ ပေါ်မည်မဟုတ်ဘဲ လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။Posted4months,3weeks agoView this post on Facebook နီကိုရဲ လူနှင့်သူတို.၏ဟာသများ (epub)
Credit to Myanmar E -book for Android (Epub)Posted4months,4weeks agoView this post on Facebook ညီပုလေး မြေးသူကြီး (epub)
Credit to Myanmar E -book for Android (Epub)Posted4months,4weeks agoView this post on Facebook မောင်ထွန်းသူ ရဲတိုက် (epub)
Credit to Myanmar E -book for Android (Epub)Posted4months,4weeks agoView this post on Facebook မင်းလူ ယမကာလုလင် (epub)
Credit to Myanmar E -book for Android (Epub)Posted4months,4weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections commented on their own photo.Posted4months,4weeks ago Bertil Lintner ရေး၍ ကျော်ဝင်း မြန်မာပြန်သည်
Credit to burmeseclassicPosted5months agoView this post on Facebook ကျော်မြသန်း မထင်မှတ်ဘဲ
Credit to burmeseclassicPosted5months agoView this post on Facebook ကျော်မြသန်း ကြိုးသမားကြမ္မာ
Credit to burmeseclassicPosted5months agoView this post on Facebook ဖိုးကျော့ အင်တွဲ၏ပွဲ.လျက်အရှာထွက်
Credit to burmeseclassicPosted5months agoView this post on Facebook ဖုန်းများတွင် Mediafire ၏ Authorized Download ကို ကျော်နိုင်မည့်နည်းလမ်း
Mediafire လင့်သည် Download လုပ်ရလွယ်ကူသဖြင့် ယခင်ကတည်းက အသုံးပြုသူများ နှစ်ခြိုက်စွာသုံးစွဲကြသည်။ သို့သော် ရံဖန်ရံခါ တွင် Authorized Download ဟူသော အနီရောင် Button ပေါ်လာသည့်အခါ ပေးထားသော စာလုံးနှစ်လုံးအား ပြန်လည်ထည့်ပေး၍ ဒေါင်းရသည်။ ၎င်းသည် ကွန်ပြူတာများတွင်သာ အဆင်ပြေပြီး Smart Phone, Tablet များတွင် အဆင်မပြေသဖြင့် အသုံးပြုသူများအခက်တွေ့ကြရသည်။ အထူးသဖြင့် ပြန်လည် ထည့်သွင်းရမည့် စာလုံးနှစ်လုံး မပေါ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖုန်းများတွင် Authorized Download ကို မပေါ်စေလိုလျှင် mediafire အကောင့် ဖွင့်ပြီး ၀င်ထားခြင်းဖြင့် Authorized Download ဆိုသည့် အနီရောင် ခလုပ်အား ကျော်ဖြတ်နိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် www.mediafire.com သို့သွားပါ။ ပြီးလျှင် Log in ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် Username တွင် [email&#160;protected] ၊Password တွင် 999999999 (9 ကိုးလုံး) အား ထည့်ပေးပြီး ၀င်ထားခြင်းဖြင့် မည်သည့် Authorized Download မျှ ပေါ်မည်မဟုတ်ဘဲ လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။Posted5months, 1 week ago B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.Posted5months,2weeks agoView this post on Facebook ညိုမြ - နမ်းကြာညို (လက်ရွေးစင်စာစုများ)
ဆရာညိုမြ ရေးသားခဲ့သော စာပေများကို မဂ္ဂဇင်း အစောင်စောင် ဂျာနယ် အစောင်စောင်ကနေ ထုတ်နုတ်ပြီး စုစည်းထားတဲ့
နမ်းကြာညို လက်ရွေးစင်စာပေါင်းစုပါ။ ဆရာညိုမြရဲ့ ငယ်မူငယ်သွေး လက်ရာလေးတွေနဲ့အတူ သရော်တော်တော် ရေးဟန်လေးတွေကိုလဲ
တဝကြီးဖတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်က စာမျက်နှာ ၆၀၀ ကျော် မနည်းထူတာမို့ သည်းခံပြီးသာ ဆွဲယူကြပါခင်ဗျာ။ နောင်တစ်ချိန်မှာ တန်ဘိုး
မဖြတ်နိုင်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိပါကြောင်း ..။
Credit to Nyisay Myanmar Ebook CreatorPosted6months agoView this post on Facebook ရာဖ်ဘန့်ခ်ျ အမေရိကန်တဦး၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ် (10 MB)
Credit to စာဖတ်ခန်းPosted6months agoView this post on Facebook အောင်မန်း ရှေ့ဆောင်လေသူရဲလင်းဗတ် (6MB)
Credit to စာဖတ်ခန်းPosted6months agoView this post on Facebook ကာလ်တီရိုဝင် အိပ်မက်ကမ္ဘာ (13MB)
Credit to စာဖတ်ခန်းPosted6months agoView this post on Facebook မောင်ထွန်းသူ ကြောက်စရာ့ရောမ (4MB)
Credit to စာဖတ်ခန်းPosted6months agoView this post on Facebook လင်းဦးခင် ကျွန်မဘ၀ပုံရိပ် ပထမတွဲ (4.3 MB)
လင်းဦးခင် ကျွန်မဘ၀ပုံရိပ် ဒုတိယတွဲ (6MB)
Credit to စာဖတ်ခန်းPosted6months agoView this post on Facebook မင်းရှင် လမ်းပေါ်မှာ
Credit to Nyisay Myanmar Ebook Creator'sPosted6months agoView this post on Facebook ဆရာကျော်အောင် တာရိုင်းမြေ (ပ + ဒု)
Credit to Nyisay Myanmar Ebook Creator's
https://www.dropbox.com/s/zubl45g4ptyrog6/Virginsoil2.pdfPosted6months,2weeks agoView this post on Facebook ဒေါက်တာကျော်မြင့် ခရစ်(စ)တီယန်ဘားနဒ်၏ဘဝတစ်ခု
Credit to Nyisay Myanmar Ebook Creator'sPosted6months,2weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections commented on their own photo.Posted7months ago မင်းမြတ်သူရ ငရဲကလူပြာပူမကြောက်
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook နတ်ရွာမိုး အချစ်ချိုအချစ်ခါး
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook လျှို.၀ှက်ဆန်းကြယ်မဂ္ဂဇင်း_2014Jun (30.31MB)
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook မြပုလဲသွယ် အချစ်စင်စစ်ဧကန်ဖြစ်၍
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook ကလောင်စုံ ခေါင်းထမ်းလာတဲ.တစ္ဆေ
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections commented on their own photo.Posted7months,3weeks ago ပြစ်မှုမဂ္ဂဇင်း_2014May 44.54MB
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook မှုခင်းအမြင်_2014Apr (20.91MB)
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာ သင်္ချိုင်းကုန်းမှအပင်ခြောက်ကြီး
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook ပညာဒီပ စိတ်တစ္ဆေ
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook ဒေ၀တာ နတ်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook တြိသင်္ခ တိုက်ပျက်အတွင်းမှဝိညာဉ်ဖြူ
Credit to burmeseclassicPosted7months,3weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.On Air စာအုပ်မာတိကာ ၊ Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။Posted 8 months,3weeks agoView this post on Facebook တင်မောင်မြင့် မာတင်လူသာကင်း(အငယ်)နှင့်ကျွန်မဘ၀
မြန်မာ epub စာအုပ်များ http://goo.gl/uCP686Posted 8 months,4weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections sharedapage: လောကနတ်.စာအုပ်များကို လေ့လာခြင်း စာအုပ်များကို ဝေငှခြင်းPosted 8 months,4weeks agoလောကနတ်View this post on Facebook တြိစက္ခ ပိုးရွှေတောင် တောင်လုံးကျော် မှော်ဝင်ကြိုး
Credit to လောကနတ်
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months agoView this post on Facebook တြိစက္ခ ဂျူပီတာပေါ်မှပဉ္စလက်မိစ္ဆာ
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months agoView this post on Facebook တြိစက္ခ မြောက်ကျွန်းသူသုန္ဒရီ
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months agoView this post on Facebook တြိစက္ခ ပလ္လင်သုံးဆင့်မြိုင်သေလာ
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months agoView this post on Facebook တြိစက္ခ နေမိန္ဒရငရဲတွင်း
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months agoView this post on Facebook တြိစက္ခ အသူရကာယ်ဘုံသား
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months agoView this post on Facebook တြိစက္က နဂါးပျံမာန်စွယ်
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months agoView this post on Facebook တြိစက္က ချစ်ငြိုးမပြေတဲ့အချစ်ကြိုးကဝေ
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months agoView this post on Facebook B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.On Air စာအုပ်မာတိကာ ၊ Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။Posted9months, 1 week agoView this post on Facebook ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း နေမင်းတစ်ထောင် (၈) အုပ် အစအဆုံးပါ
Credit to Nyisay Myanmar Ebook Creator
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months, 1 week agoView this post on Facebook ဆုံနေရက်နဲ့လွမ်းလေခြင်း (ဂျူး) (7.08MB)
(စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ တွင်ရှာပါ။)Posted9months, 1 week agoView this post on Facebook B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.On Air စာအုပ်မာတိကာ ၊ Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။Posted9months, 1 week agoView this post on Facebook B4Ucollections commented on their own status.Posted9months, 1 week ago မှတ်ဥာဏ်ထက်သန်စေလိုသော် (ဦးသာညွှန့်)
ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကို အဟောင်းတန်းကတွေ့လို့ဝယ်ထားတာပါ။ ၀ယ်တုန်းက မျက်နှာဖုံးတောင်မပါတော့ပါဘူး၊ စာအုပ်တိုက်က အသစ်ပြန်ရိုက်သေးလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။ ရှားပါးပြီး အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ပြန် Share ပါတယ်။
စာအုပ်ကိုအစအဆုံး Scan ဖတ်ပြီး Ebook ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ချစ်စမ်းမောင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(ညီငယ် Khin Zaw Hein မှEbook ပြုလုပ်ပေးပို့ပါသည်။ )Posted9months, 1 week ago B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.On Air စာအုပ်မာတိကာ ၊ Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။Posted9months,2weeks agoView this post on Facebook ဖွားလောက်ကြီး(ဖိုးသုည)စာအုပ်များ (၈) အုပ်
(၁)ဖွားလောက်ကြီး - ၀ိညာဉ်ကွဲတစ္ဆေ
(၂)ဖွားလောက်ကြီး - ၀ိညာဉ်မေမေရဲ့မိစ္ဆာသား
(၅)ဖိုးသုည - သေမင်းဒိုင်ယာရီထဲက ၀ိညာဉ်မလေးနာမည်
(၆)ဖိုးသုည - ၀ိညာဉ်တို့၏ မာယာမြို့တော်
(၇)ဖိုးသုည - တမလွန်စီရင်ချက်ထဲက ၀ိညာဉ်မလေးရဲ့အမုန်း
(GoogleDocumentဒေါင်းလုပ်သည်ဝဘ်ဆိုက်၏ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးရှိ Fileကိုနှိပ် Download ကို နှိပ်၍ စာအုပ်များကို ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။)Posted9months,3weeks agoView this post on Facebook ပညာဒီပစာအုပ်များ (၉)အုပ်
(၁)ပညာဒီပ နှစ်ဆောင်ပြိုင်မာယာ 18.21MB
(၄)ပညာဒီပ - သူသတ်ကုန်း
(၅)ပညာဒီပ - ပြဒါးပျံစက်ကွင်း
(၆)ပညာဒီပ - လိပ်ပြာကြိုး
http://www.mediafire.com/download/fg4q1xxirtoqeac/ပညာဒီပ_စိတ်တစ္ဆေ.pdfPosted9months,3weeks agoView this post on Facebook သုမောင် အရက်သမားအမှားတစ်ခါ epub
မြန်မာ epub စာအုပ်များ http://goo.gl/uCP686 တွင်ရှာပါPosted9months,3weeks agoView this post on Facebook မစန္ဒာ ကွက်လပ်ကလေးဖြည့်ပေးပါ epub
မြန်မာ epub စာအုပ်များ http://goo.gl/uCP686 တွင်ရှာပါPosted9months,3weeks agoView this post on Facebook မြန်မာ Epub စာအုပ်များ
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ၀တ္ထုတိုများ Epub
ညီပုလေး မြေးသူကြီး (epub)
မစန္ဒာ ကွက်လပ်ကလေးဖြည့်ပေးပါ epub
မင်းလူ ယမကာလုလင် (epub)
မောင်ထွန်းသူ ရဲတိုက် (epub)
နီကိုရဲ လူနှင့်သူတို.၏ဟာသများ (epub)
သုမောင် အရက်သမားအမှားတစ်ခါ epub
မြန်မာ epub စာအုပ်များ http://goo.gl/uCP686Posted9months,3weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.B4U မာတိကာ ပြုလုပ်ဆဲဖြစ်သဖြင့် On Air မာတိကာဖြင့် လတ်တလော သုံးနိုင်ပါသည်။ Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 10 months,2weeks agoView this post on Facebook ဒဂုန်ခင်ခင်လေးစာအုပ်များ (၄ အုပ်)
(Google Document ဒေါင်းလုပ်သည်ဝဘ်ဆိုက်၏ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးရှိ Fileကိုနှိပ် Download ကို နှိပ်၍ စာအုပ်များကို ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။)
(၄)ဒဂုန်ခင်ခင်လေး ရွှေစွန်ညိုနှင့်သားရွှေစွန်ညို 14.86MB
http://www.mediafire.com/download/4ql0od62u44v4zs/ဒဂုန်ခင်ခင်လေး_ရွှေစွန်ညိုနှင့်သားရွှေစွန်ညို.pdfPosted 10 months,2weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections commented onapost.Posted 10 months,2weeks ago ဒဂုန်တာရာ စာအုပ်များစုစည်းမှု (၉ အုပ်)
၀၁။ ဒဂုန်တာရာ - မေ
၀၂။ ဒဂုန်တာရာ - သုံးနှစ်သုံးမိုး ပိုးထီးငုဝါပွင့် အပြာနု
၀၃။ ဒဂုန်တာရာ - မြိုင်
၀၄။ ဒဂုန်တာရာ+ကြည်အေး - အိမ်မက်အပြင်ကလူ
၀၅။ ဒဂုန်တာရာ+ကြည်အေး - စိမ်းမြ ညတစ်ည
၀၆။ ဒဂုန်တာရာ - ရုပ်ပုံလွှာ
၀၇။ ဒဂုန်တာရာ - ကဗျာဆရာ၏ ရိုးဖြောင့်မှု
၀၈။ ဒဂုန်တာရာ - ခရမ်းနုရောင်
၀၉။ ဒဂုန်တာရာ - လရောင်ရွှမ်းမြသော
http://www.mediafire.com/?n5k9e6dckwmdgdaPosted 10 months,2weeks agoView this post on Facebook ဒဂုန်ရွှေမျှား၏၀တ္တုများစုစည်းမှု (၂၂)အုပ်
(၄) ဘ၀မုန်တိုင်း နှင်းမုန်တိုင်း
(၇) ဦးထင်ကျော်၏ စွန့်စားခန်း
(၂၁) အံ့သြဖွယ်ရာ ကျွန်းဒီပါ
(၂၂)ဒဂုန်ရွှေမျှား စုံထောက် ဦးထင်ကျော် (အတွဲ ၅)
http://www.mediafire.com/download/r25fg94e098k8ayPosted 10 months,2weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.B4U မာတိကာ ပြုလုပ်ဆဲဖြစ်သဖြင့် On Air မာတိကာဖြင့် လတ်တလော သုံးနိုင်ပါသည်။ Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အနက်အဓိပ္ပာယ်အသံထွက် (ထင်လတ်)
http://www.mediafire.com/?7ph3bbe31352kwhPosted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook အခြေခံဒရမ်တီးခတ်နည်း (ထက်မိုး)
http://www.mediafire.com/?kq079dxngoayo2cPosted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook ထင်လင်းစာအုပ်များ (၄ အုပ်)
( ပေါ်လီယာနာ စာအုပ်အား Win Font ဖြင့် ကွန်ပြူတာထဲတွင် ထည့်ပြီးဖတ်ပါ။)Posted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook ထက်အောင်ဇင်(ဘာသာစကား)စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
(၂)အလွယ်ကူဆုံး ကိုရီးယား စကားပြော
http://www.mediafire.com/?orjpa4r42hrf7wxPosted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook ထူးဆွေအောင်စာအုပ်များ (၅ အုပ်)
http://www.mediafire.com/?4sup1pg15qs8up9Posted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook ထူးအိမ်သင် ကွယ်လွန်ခြင်းအမှတ်တရ-အစိမ်းရင့်ရောင် ရက်စွဲများ
http://www.mediafire.com/?cmck4i3ywrnrpyhPosted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.B4U မာတိကာအား ပြင်ဆင်ဆဲဖြစ်သဖြင့် OnAir မာတိကာဖြင့် လတ်တလော အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Posted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook မိုးနီလွင်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
http://www.mediafire.com/?gbt6iigtljsrcy3Posted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections commented on their own photo.Posted 10 months,3weeks ago ထောင်မှူးကြီးဦးသိန်းဝင်းစာအုပ်များ (၉ အုပ်)
(၁)ငါးပေါက်တွင်းရတနာသိုက် (ထောင်မှူးကြီး ဦးသိန်းဝင်း)
(၂)ကျွန်တော် နှင့် ထောင်စခန်းများ -(ထောင်မှူးကြီး ဦးသိန်းဝင်း)
(၃)တုံငယ်ဝရတနာတိုက် (ထောင်မှူးကြီး ဦးသိန်းဝင်း)
(၅) မကောင်းထောင်ပို့(ထောင်မှူးကြီး ဦးသိန်းဝင်း)
(၈)တကောင်းမြို့ ဟောင်းက သမုဒယပုံပြင် အပါအ၀င်   အကျဉ်းထောင်သုတ၊ ရသ၀တ္ထုတိုများ
(၉)အတိတ်ဘဝက ပဋ္ဌာန်းဆက်အိမ်မက် အပါအ၀င်   သည်းထိတ်ရင်ဖို ဂမ္ဘီရ၀တ္ထုတိုများ
http://www.mediafire.com/download/wqzm3ob9ajs28l8/Posted 10 months,3weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections commented on their own photo.Posted 10 months,4weeks ago တင်မောင်မြင့်စာအုပ်များ (၃ အုပ်)
http://www.mediafire.com/download/5o1nrfn44y5rntj/တင်မောင်မြင့်_လေရဟတ်နီ.pdfPosted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook တြိသင်္ခ စာအုပ်များ (၅)အုပ်
http://www.mediafire.com/download/idmmpmerp0h8n9z/တြိသင်္ခ%20နမ၀မြောက်ကျောက်ပြဒါးလမ်း.pdfPosted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook တြိစက္ခစာအုပ်များ
(၂)တြိစက္ခ သိင်္ဂါရွှေရည် နရဏီကျော့ကွင်း
http://www.mediafire.com/download/gdbkpv85egd5a2lPosted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook တြိစက္ကစာအုပ်များ (၁၇ အုပ်)
(၁)၀င်းဂိတ် ၏ပျောက်ဆုံးနေသော ရတနာသိုက်
(၆)တြိစက္က ရာဇူတိုင်မှ ရေသရဲ
(၇)တြိစက္က ကျောက်ပြဿဒ် ပလ္လင်မှော်
http://www.mediafire.com/download/8k2z932dgd9d6yz/တြိစက္က%20မြနန်းရှင်နှင့်ဖိုဝင်မှားသောမိစ္ဆာ.pdfPosted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook တော်ဘုရားလေး အောင်ဇေ စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
(၂)ရတနာပုံမှ ရတနာဂီရိသို့  (တော်ဘုရားလေးအောင်ဇေ)
http://www.mediafire.com/?cvg4nagank94nxn/-ရတနာပုံမှရတနာဂီရိသို့(2).pdfPosted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook မြေလတ်မောင်မြင့်သူ-ဆီးချိုရောဂါကျမ်းမာရေးစကားဝိုင်း နှင့်ရောဂါကုထုံး (ဒေါက်တာအေးကျော် နှင့် တိုင်းရင်းသမားတော် ဦးစည်သူ)
http://www.mediafire.com/?26il52685b88jc9Posted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook တင်စိုး (ဘောဂဂုဏ်)-ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စီးပွားရေးအမြင်
http://www.mediafire.com/?ab51oj5tjb8ptt5Posted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook တင်မော် (ဓာတု)စာအုပ်များ (၃ အုပ်)
(၃)ဂျစ်ပစီတာရော့ဗေဒင်ဟောနည်း (တင်မော် -ဓာတု (အမျိုးသားစာပေဆုရ)
http://www.mediafire.com/download/v8yjvybh9n85c1t/gipsytarrot%20(onairmm).pdfPosted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook တင်မိုးစာအုပ်များ (၆ အုပ်)
(၁)ပုဂံကျောင်းမှ ခေါင်းလောင်းသံ (တင်မိုး)
(၂)ဖလ်မီးအိမ်သို့ အလွမ်းစာ (တင်မိုး)
http://www.mediafire.com/?jfykl9buagxa2kuPosted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook တင့်တယ်-ကမ္မဖလ
https://docs.google.com/open?id=0B674PBCHce-mSXhGdzJraFMzcGsPosted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook တိုက်စိုးစာအုပ် (၂ အုပ်)
http://www.mediafire.com/?d7c38ob9tkfn6r1Posted 10 months,4weeks agoView this post on Facebook B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.B4U မာတိကာ ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သဖြင့် OnAir ဖြင့် ခေတ္တသုံးစွဲပေးကြပါရန်။Posted 11 months agoView this post on Facebook တိုးထက်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
(၁)လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရနယ် (တိုးထက်)
-ဘ၀ရှေ့ရေးကိုကြိုသိနေခဲ့သူ သမ္မတ အေဘရာဟင်လင်ကွန်း
-ဆာအာသာကိုနင်ဒွိုင်း (ရှားလော့ဟုမ်းရေးသားသူ) နှင့် နာမ်လောက
-စသည်တို့နှင့် လူဝင်စား သေရွာပြန် စသည့် -ဆန်းကြယ်သောအဖြစ်အပျက်များစွာပါဝင်ပါသည်။
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQOd21EaHZiX3NRVFE/editPosted 11 months agoView this post on Facebook တက်တိုးစာအုပ်များ ( ၆ အုပ်)
(၁)အေဗရာဟင် လင်ကွန်း (တက်တိုး)
(၂)ဘာသာပြန်စာပေ (တက်တိုးအပါအ၀င် ကလောင်စုံစာတမ်းများ)
http://www.mediafire.com/?aob91b12l5psl9mPosted 11 months agoView this post on Facebook တင်နိုင်တိုးစာအုပ်များ (၅ အုပ်)
(၁)ပုဂံစေတီပုထိုးများ သမိုင်းနှင့် ခရီးသွားလမ်းညွှန်
(၃)တင့်နိုင်တိုး ခေတ်ဟောင်း သတင်းစာများကပြောသော ၁၂လရာသီ အဖြစ်အပျက်များ
http://www.mediafire.com/download/ispwsc0yf8w14ae/တင်နိုင်တိုး-ကုန်းဘောင်ခေတ်မင်းမှုထမ်းများအဘိဓါန်.pdfPosted 11 months agoView this post on Facebook တင်သန်းဦး- စန္ဒီမိုးဦးဖြူ
http://www.mediafire.com/?cyos24gq3i4kpwpPosted 11 months agoView this post on Facebook မဟတ္တမဂန္ဓီလုပ်ကြံမှု -ကိုးနာရီ (တင်ထွေး)
http://www.mediafire.com/download/3a4ba48qxp2abtm/TinHtwe_gnadi_(onairmm).pdfPosted 11 months agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်တင်မြင့် (၅ အုပ်)
http://www.mediafire.com/download/8s1qwdguybgxq14/Posted 11 months agoView this post on Facebook စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းအရာရှိတစ်ဦး (တက္ကသိုလ်မောင်သန့်စင်)
http://www.mediafire.com/?gxvn20rb3gjeq1dPosted 11 months agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်စိန်တင်စာအုပ်များ (၇ အုပ်)
(၃)၁၉၄၅ မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမိုင်း
http://www.mediafire.com/?5wjjc614w9a48z5Posted 11 months agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်စိုးမိုးနိုင်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQON1p5aS1sUEx5QXc/editPosted 11 months agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ် စာအုပ်များ (၅ အုပ်)
(၅)တက္ကသိုလ် နန္ဒမိတ် (သို့မဟုတ်) ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို တောင်းခံသူ
http://www.mediafire.com/download/7jsv4wbwfnh2hmdPosted 11 months agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်နေ၀င်းစာအုပ်များ (၅ အုပ်)
(၂)တက္ကသိုလ်နေ၀င်း- အင်းဝရွှေနန်းရောက် ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့မှတ်တမ်း (၁၈၅၅)
(၃)တက္ကသိုလ်နေ၀င်း - ကျွန်တော် မမေ့နိုင်သော ဆယ့်ကိုးဂျုလိုင်
(၄) တက္ကသိုလ်နေ၀င်း-ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှတ်တမ်း
(၅)တက္ကသိုလ်နေ၀င်း- သူသေကိုယ်သေ (မြန်မာပြန်)
http://www.mediafire.com/?eehk5bux345f68vPosted 11 months agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်စာအုပ်များစုစည်းမှု (၂၄ အုပ်)
(၁)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – လွမ်း
(၂)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – အိုင်ကျူ မည်မျှပုံ၍ ယုံရမည်နည်း
(၃)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – နွေကန္တာဦး
(၄)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်မိတယ်
(၅)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည်ခိုင်
(၆)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – လွမ်းတေးမဆုံးစေနှင့်စောသခင်
(၇)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – နှင်းငွေ့တစ်ထောင့် မိုးတစ်မှောင့်
(၈)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – မောင့်ဘဝညအလားကွယ်
(၉)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – ပညာရဲ့ သဘော
(၁၀)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – ရှားလော့ဒေဝီ နှင့် ဘာသာပြန်ကဗျာများ
(၁၁)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – မိုးတွေရွာမှဖြင့်လျှင်ကွယ်
(၁၂)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – တန်ခူးလေနှင့်လျောတော့သည်
(၁၃)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – မျက်ရည်လောကများ၏ ဟိုမှာဘက်
(၁၄)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – မိုးညအိပ်မက်မြူ
(၁၅)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – ဝသန်လေချိန်မှန်ကူး
(၂၂)လွမ်းပါလေရစ် သဲသောင်ငွေဦး (တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်)
(၂၄)တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်ရဲ့ သူ့ကျွန် မခံပြီ ရပါပြီ
(၂၅)ပင်ဒိုရာအိုးပွင့်ပြီး ဟားပီးဇ်တို့ ပျံလာချိန် (တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်)
http://www.mediafire.com/download/6z3dddbukdwlrlh/takathobonenaing%20(onairmm).pdfPosted 11 months agoView this post on Facebook ကံ့ကော်တောမှဇာတ်လမ်းများ (တက္ကသိုလ်ခင်မောင်အေး)
(တစ်ခါတုန်းက တက္ကသိုလ်ကြီး၏ ကံ့ကော်တောမှ ဆွတ်ပျံလွမ်းမောဖွယ်၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ ကြည်နူးဖွယ် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးများအား ဖတ်ရှုရပါလိမ့်မည်။)
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQOWEtZbC1MRVJRVFk/edit?pli=1Posted 11 months agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်ဝင်းကြွယ်စာအုပ်များ (၇)အုပ်
(၁)၀င်းကြွယ် အတုံ.အလှည့် ပ
၀င်းကြွယ် အတုံ.အလှည့် ဒုဇတ်သိမ်း
(၂)၀င်းကြွယ် တေဇောလက်ဝါးဒေ၀ီဓါး ၁-၈
(၃)၀င်းကြွယ် ကန္တာရမုန်တိုင်းသွေးစက်ဝိုင်း ပ
၀င်းကြွယ် ကန္တာရမုန်တိုင်းသွေးစက်ဝိုင်း ဒုဇာတ်သိမ်း
(၄)အရှေ့ကျွန်းမှ ပုလွေရှင် (ပ) (တက္ကသိုလ်ဝင်းကြွယ်)
အရှေ့ကျွန်းမှ ပုလွေရှင် (ဒု) (ဇာတ်သိမ်း)(တက္ကသိုလ်ဝင်းကြွယ်)
(၇)တက္ကသိုလ်ဝင်းကြွယ် မှဲ.ရှစ်လုံးရှင်သိုင်းဥကင် ၁-၅
တက္ကသိုလ်ဝင်းကြွယ် မှဲ.ရှစ်လုံးရှင်သိုင်းဥကင် ၆ဇတ်သိမ်း
http://www.mediafire.com/?4r80kaojxxin88jPosted 11 months agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ် နေလင်းအောင် စာအုပ်များ
တက္ကသိုလ် နေလင်းအောင် ပုံပြင်လေလားမိစ္ဆာဓါး ပ http://www.mediafire.com/download/he4bossa766eoqk
တက္ကသိုလ် နေလင်းအောင် ပုံပြင်လေလားမိစ္ဆာဓါး ဒု ဇာတ်သိမ်း http://www.mediafire.com/download/3co974d3lzlyyfn
ဓားတစ်ရာ ကြွေပန်းချီ ၁-(နေလင်းအောင်)
ဓားတစ်ရာ ကြွေပန်းချီ ၂(နေလင်းအောင်)
ဓားတစ်ရာ ကြွေပန်းချီ ၃(နေလင်းအောင်)
ဓားတစ်ရာ ကြွေပန်းချီ ၄(နေလင်းအောင်)
သိုင်းလောက၏ စိန်ခေါ်သံ (နေလင်းအောင်)
လျှပ်တပြက် လုရှောင်ဖုန်း (တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် )
သရဖူငြင်းသော သိုင်းဧကရာဇ် (တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်)
် တြိဂံရွှေပြား ပထမပိုင်း
် တြိဂံရွှေပြား ဒုဇတ်သိမ်း
နေလင်းအောင် ရေခဲဓါးနှင့်မီးလျှံဓါး ပထမပိုင်း
နေလင်းအောင် ရေခဲဓါးနှင့်မီးလျှံဓါး ဒုဇတ်သိမ်း
နေလင်းအောင် ကျားကုတ်ကျားခဲသိုင်းပြိုင်ပွဲ ၁
နေလင်းအောင် ကျားကုတ်ကျားခဲသိုင်းပြိုင်ပွဲ ၂
နေလင်းအောင် ကျားကုတ်ကျားခဲသိုင်းပြိုင်ပွဲ ၃
နေလင်းအောင် ကျားကုတ်ကျားခဲသိုင်းပြိုင်ပွဲ ၄
နေလင်းအောင် ကျားကုတ်ကျားခဲသိုင်းပြိုင်ပွဲ ၅
နေလင်းအောင် ကျားကုတ်ကျားခဲသိုင်းပြိုင်ပွဲ ၆ဇတ်သိမ်း
နေလင်းအောင် လေရှုးတောင်မှဓါးသိုင်းကျမ်း ပ
နေလင်းအောင် လေရှုးတောင်မှဓါးသိုင်းကျမ်း ဒုဇတ်သိမ်း
ပတွဲ - http://www.mediafire.com/download/3g02e1heyehe6aq
ဒု (ဇာတ်သိမ်း) - http://www.mediafire.com/download/u8d0i17mq197aaz
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် ပိုင်ယွမ်ဆန်းဓားသမား စဆုံး
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် ပိုင်ယွမ်ဆန်းဓားသမား ၁
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် ကံကြမ္မာကြွေးရက်မရွှေး (၀၁)
ကံကြမ္မာကြွေးရက်မရွှေး (၀၈ ဇာတ်သိမ်း)
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် ဓားဘုရင်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၀၁)
ဓားဘုရင်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၀၈ ဇာတ်သိမ်း)
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် သူရဲကောင်းတို.၏စွမ်းရည် ၁
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် သူရဲကောင်းတို.၏စွမ်းရည် ၂
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် သူရဲကောင်းတို.၏စွမ်းရည် ၃ဇာတ်သိမ်း
http://www.mediafire.com/download/jcljagos0kex0y1/တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်%20သူရဲကောင်းတို.၏စွမ်းရည်%20၃ဇာတ်သိမ်း.pdfPosted 11 months agoView this post on Facebook B4Ucollections commented onapost.Posted 11 months ago B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.B4U မာတိကာ ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သဖြင့် OnAir ဖြင့် ခေတ္တသုံးစွဲပေးကြပါရန်။Posted 11 months agoView this post on Facebook တာရာမင်းဝေစာအုပ်များ (၄၈ အုပ်)
၀၁။ တာရာမင်းဝေ - စုန်းကိုက်ခံရတဲ့သစ်သီး
၀၂။ တာရာမင်းဝေ - ရွှေအတောင်ပံမှာဒဏ်ရာတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့နေ့
၀၃။ တာရာမင်းဝေ - နေရဲ့အင်္ကျီ
၀၄။ တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်တူးဖော်ခဲ့သည့်မြေစိုင်မြေခဲများအကြောင်း
၀၅။ တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နှင့်နတ်ဘုရားရုပ်တု
၀၆။ တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နှင့်ဆောင်းရာသီဒဿန
၀၇။ တာရာမင်းဝေ - မိုးရာသီပတ်ပျိုး
၀၈။ တာရာမင်းဝေ - ၀င်္ကပါကိုဖွင့်တဲ့သော့
၀၉။ တာရာမင်းဝေ - လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င်
၁၀။ တာရာမင်းဝေ - ရှူး
၁၁။ တာရာမင်းဝေ - လရောင်ကိုပန်၍ညာဉ့်ယံလည်းမွှေးမြမြဖြူစင်နိုင်စေ
၁၂။ တာရာမင်းဝေ - ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ
၁၃။ တာရာမင်းဝေ - မျဉ်းဖြောင့်၏ဧရိယာ
၁၄။ တာရာမင်းဝေ - ယန္တယားအရေခွံနဲ့လူ
၁၅။ တာရာမင်းဝေ။ မိုးခေါင်လို့တီးတဲ့ဗုံသံ
၁၆။ တာရာမင်းဝေ - ပင်လယ်အတုထဲကကျွန်း
၁၇။ တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နှင့်ကြေးသွန်းယဉ်ကျေးမှု
၁၈။ တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နှင့်အ၀ါရောင်ဗီးနပ်စ်
၁၉။ တာရာမင်းဝေ - ပန်းခေတ်ကလမင်း
၂၀။ တာရာမင်းဝေ - ကျောခိုင်းထားတဲ့နေမင်း
၂၁။ တာရာမင်းဝေ - နတ်ပျိုမအတွက်ပန်း
၂၂။ တာရာမင်းဝေ - အမှတ်တရစာစုများ
၂၃။ တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နှင့်ဧဒင်ကချေသည်
၂၄။ တာရာမင်းဝေ - ရွှေဖိနပ်မှာ အစိမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နှင့်ကောင်မလေး
၂၅။ တာရာမင်းဝေ - ဆောင်းကြိုးပြတ်ရွာမွန်းတည့်အလွန် (၄)နာရီ
၂၆။ တာရာမင်းဝေ - မှော်ဆရာရဲ့ကျောင်းစာအုပ်
၂၇။ တာရာမင်းဝေ - အနေအထိုင်မတတ်တဲ့ကြယ်
၂၈။ တာရာမင်းဝေ - သင်နှင့်နံနက်ခင်းကိုသာဝင်ခွင့်ပြုမည်
၂၉။ တာရာမင်းဝေ - အရှေ့မြို့ရိုးမှမိုးရေစက်များ
၃၀။ တာရာမင်းဝေ - ကောင်းကင်အကြွေကောက်တဲ့လက်
၃၁။ တာရာမင်းဝေ - သူ့အိုးပုတ်လေးကျွန်တော်ပြန်မပေးပါ
၃၂။ တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နှင့်ကံကြမ္မာလက်နှက်များ
၃၃။ တာရာမင်းဝေ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပုရပိုက်
၃၄။ တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နှင့်ကြယ်မြင်လမြင်လောကဓံ
၃၅။ တာရာမင်းဝေ - ကိုးမရှိတဲ့န၀င်း
၃၆။ တာရာမင်းဝေ - ကြယ်သီချင်းနှင့်လမင်းသံစဉ်
၃၇။ တာရာမင်းဝေ - ကိုယ့်လက်နဲ့ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ့တန်း
၃၈။ တာရာမင်းဝေ - စောင်းကြိုးတန်းလန်းနှင့်လခြမ်း
၃၉။ တာရာမင်းဝေ - သိုးဆောင်းဂစ်တာတစ်လက်ရဲ့မှတ်တမ်း
၄၀။ တာရာမင်းဝေ - တစ်ကိုယ်တော်ရေးတဲ့ကကြီးခခွေး
၄၁။ တာရာမင်းဝေ - ပန်းလက်ဖ၀ါးမှာပါးအပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ကောင်လေး
၄၂။ တာရာမင်းဝေ - ကတ်သီးကတ်သတ် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ
၄၃။ တာရာမင်းဝေ - နက္ခတ်ရစ်သမ်
၄၄။ တာရာမင်းဝေ - လူနံပါတ် (၁၃)
၄၅။ တာရာမင်းဝေ - စံပယ်အတွေး
၄၇။ တာရာမင်းဝေ - တေးသွားနံပါတ် ၁၀၀၁
၄၈ တာရာမင်းဝေ -တကိုယ်တော်ရေးတဲ့ကကြီးခခွေး
http://www.mediafire.com/?4vq8hdeg381jcy3Posted 11 months agoView this post on Facebook ဌေးမောင်-ပျောက်ဆုံးနေသောကမ္ဘာ
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQOb2NaVkhzeWlJT0U/editPosted 11 months agoView this post on Facebook ဘာသာကြီးလေးခု၏ အနှစ်သာရများ (ညိုသောင်း)
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQOY3RrLXZ5WERZOXc/editPosted 11 months agoView this post on Facebook ညိုမြ-ကုန်းဘောင်ရှာပုံတော်
http://www.mediafire.com/?idhxn8fo547u79dPosted 11 months agoView this post on Facebook ညီသစ်စာအုပ်များ (၁၁ အုပ်)
(၂)သူခိုးမရှိတဲ့မြို့ (The Town Without Thief)
http://www.mediafire.com/?rwwnyb9wwbjuljcPosted 11 months agoView this post on Facebook အိပ်မက်ပန်းအလွမ်းနှင်းဆီ (ညိုနှင်းအိမ်)
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQOdXdLcVhMT1pGVGM/editPosted 11 months agoView this post on Facebook ညီညီထွေး စာအုပ် ( ၁ အုပ်)
(၁)Rock Guitar တီးနည်း
http://www.mediafire.com/?8ffjxou8bwb6f6yPosted 11 months agoView this post on Facebook ညီညီနိုင်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
(၁)စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များ (ညီညီနိုင်)
(၂)အောင်မြင်ရေးသော့ချက် A-Z 26 (ညီညီနိုင်)
http://www.mediafire.com/download/1jws2l082szgmvy/26%20Keys%20to%20Winning%20(NyiNyiNaing).pdfPosted 11 months agoView this post on Facebook B4Ucollections commented onapost.Posted 11 months, 1 week ago B4Ucollections commented on their own photo.Posted 11 months, 1 week ago B4Ucollections shared 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's photo.B4U မာတိကာ မရသေးသဖြင့်၊ လတ်တလော OnAir မာတိကာအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Posted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook မြန်မာ့မျက်ပွင့်(ရွာဓလေ့ လူ့ဓလေ့) (ဇေယျ)
http://www.mediafire.com/?02hc8ekvzplsd9tPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဇော်ဇော်အောင်စာအုပ်များ (၆ အုပ်)
http://www.mediafire.com/?t9ocvo5fanjycj3Posted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဇာဂနာစာအုပ်များ (၃ အုပ်)
https://www.sugarsync.com/pf/D0299089_62561891_305669Posted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဇ၀န စာအုပ်များ (၇) အုပ်
http://www.mediafire.com/?a8osee6923dpqgnPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဇော်ဂျီစာအုပ်များ (၇) အုပ်
(၆)ဇော်ဂျီ - ရသစာပေအဖွင့်နှင့်နိဒါန်း
http://www.mediafire.com/download/7rq7qygy1fd8m4c/hemingway.pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook လီကွမ်းယု နားဝင်မချိုတဲ့အမှန်တရားများ (ဇင်ဝေသော်-မြန်မာပြန်)
http://www.mediafire.com/download/k1shvjymcn4uj9d/lekwanyu(onairmm).pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဆမားညီညီ - ၀ံပုလွေများထံမှလွတ်မြောက်ခြင်း
http://www.mediafire.com/download/cp9e7nw5kshm43j/ဆမားညီညီ_-_၀ံပုလွေများထံမှလွတ်မြောက်ခြင်း.pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဆရာတော်ဦးဇောတိကစာအုပ်များ (၁၂ အုပ်)
(၆)ကိုယ်နွမ်းသော်လည်း စိတ်မပန်းပါ သူကိုပြင်ချင်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရင်ပြင်
http://www.mediafire.com/?b7y6a8o92v6y4w2Posted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဆွေမင်း-ဓနုဖြူ (တွက်ပီ) စာအုပ်များ (၂၃အုပ်)
(၁)တွက်ပီ - ကျွန်ုပ်နှင့်မြို့ပြခရီး
(၂)တွက်ပီ - လက်ရွေးစင်စွန့်စားခန်းများ(၂)
(၃)တွက်ပီ - လက်ရွေးစင်စွန့်စားခန်းများ(၃)
(၄)တွက်ပီ - မိန်းမနိုင်နည်း
(၅)တွက်ပီ - ကျွန်ုပ်နှင့်မာယာစံအိမ်
(၆)တွက်ပီ - ကျွန်ုပ်နှင့်အဏ္ဍ၀ါဒေ၀ီ ၁
(၇)တွက်ပီ - ကျွန်ုပ်နှင့်အတိတ်ခါးခါး
(၉)တွက်ပီ-ကျွန်ုပ် နှင့် အဘိုးပေါက်ပီ၏ ဘ၀မှတ်တမ်း(ပ)
(၁၀)တွက်ပီ-ကျွန်ုပ်နှင့် အဘိုးပေါက်ပီ၏ ဘ၀မှတ်တမ်း(ဒု)
(၁၆)မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ - "ကျွန်ုပ်နှင့်ဆင်ကြီးမုန်တိုင်း"
(၂၀)မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ - "ကျွန်ုပ်နှင့် မေတ္တာနှောင်ကြိုး"
http://www.mediafire.com/download/8n9bofsrwv3lbo2/TooTPe_LuPyoKyi(onairmm).pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဆောင်းဝင်းလတ်စာအုပ်များ (၄ အုပ်)
(၃)နံနက် (၃) နာရီ
http://www.mediafire.com/?5mxy1x63pwyl2s8Posted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဆောင်းလုလင် စာအုပ်များ (၂၁) အုပ်
(၁၉)နေအ၀င် ညအကူး တစ္ဆေမြူးတဲ့တော
http://www.mediafire.com/download/7nrz40rkyefhsni/မှော်မျက်ဝန်းရှင်.pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဆန်းလွင်စာအုပ်များ (၉ အုပ်)
http://www.mediafire.com/?zkiyx519ddjcqsePosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း စာအုပ်များ (၄ အုပ်)
http://www.mediafire.com/download/wa90dl775g7bvcp/myanmar-traditional-tattoo%282%29.pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဆုအဉ္ဇလီစာအုပ်များ (၂) အုပ်
http://www.mediafire.com/download/bxygih293y7p2g7/ဆုအဉ္ဇလီ%20မိုးနေ..pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook လောကီပညာပဒေသာကျမ်း - ဆုထူးပန်ဦးကျော်
http://www.mediafire.com/?c63izo19jt4e32yPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဆုမြတ်မွန်မွန်စာအုပ်များစုစည်းမှု (၃၇) အုပ်
Download link များကို mediafire သို့ ပြောင်းလဲပေးထားပြီး
စာအုပ်အသစ်များကို တတ်နိုင်သမျှ ထပ်တင်ပေးထားပါသည်း)
(၃) ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပွင့်တဲ့ နှင်းဆီတို့ရဲ့သခင်
(၄) စာမလာ သတင်းမကြား
(၆) ငါ့ရင်ခွင်ထဲကို ရွေ့ပြောင်းလာတဲ့ လရောင်မြို့တော်
(၇) လျှော်ပစ်လိုက်သော အချစ်များ
(၈) အလွမ်းတွေ နီစွေးဖို့
(၁၀) အလွမ်းတိုင်းမရပ်တဲ့ သံယောဇဉ်ရထား
(၁၁) အကြင်နာများ ကောင်းကံယံသို့ လွှင့်တင်ထားသည်
(၁၂) ဆုမြတ်မွန်မွန်-သူမကို ကျွန်တော်က တိမ်တွေပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါ
(၁၇) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄
(၁၈) လိမ္မော်ပင်ပျိုလေးရဲ့ ကောင်းဘွိုင်
(၁၉) နတ်ရထားစီးတဲ့ သူတို့သမီး
(၂၀) မျက်နက်ဝန်းရဲ့ မေတ္တာတံချု
(၂၁) ရင်ခွင့်ဆီသို့ လှေကားထစ်များ
(၂၂) ဒီဇိုင်းကွဲ ပုံစံတူ လိပ်ပြာ
(၂၃) စန်းပွင့်နေသော ၀တ္တုတိုများ
(၂၄) ပုဂံသူရဲ့ မူပိုင်လူ
(၂၆) ချစ်သူ၏ နှလုံးသားရပ်ဝန်းတွင် မိုးခေါင်နေသည်
(၂၇) အပျိုတော်အကနဲ့ စီးချင်းထိုးခဲ့တဲ့ ချစ်သူ
(၃၀) ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ထားတဲ့ မိုးတိမ်
(၃၁) အချစ်ဦးနှင့် လွဲပြီးသည့်နောက်
(၃၂) သူ .. မင်းကို တစ်ကယ်ချစ်ရင်
(၃၃) လမင်းခေတ်က ချစ်ခြင်း၏ယဉ်ကျေးမှု
(၃၄) ကျွန်မရည်းစား အမျိုးကောင်းသား
(၃၆) အိမ်မက်ကပ်တဲ့ ကမ်းစပ်
(၃၇)ဆုမြတ်မွန်မွန် သစ်ရွက်စိမ်းလေးရဲ့ နွေဦးဒဏ္ဍာရီ
http://www.mediafire.com/download/a8k4zctn7cweahhPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook မိရိုးဖလာလွန်ဗုဒ္ဓဘာသာ (ဆရာဦးသောင်းလွင်-BA)
https://docs.google.com/file/d/0BzpzWcBi8XkoYWoyRGNCSGF1eFU/editPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိပေါင်းချုပ် (ဆရာဝန်တင်ရွှေ)
(ပဟေဠိများသာမကဘဲ ဗဟုသုတပေါင်းများစွာလည်း ပါရှိသည့်စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။)
http://www.mediafire.com/download/gvd1f437fg08eej/sayarwontinshwe.pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook စက္ကောမ(မျက်လှည့်) စာအုပ်များ ( ၂ အုပ်)
(၃)လေ့လာပျော်စရာ မျက်လှည့်ပညာ (စက္ကောမ)
http://www.mediafire.com/download/m25bvyjjhvcztxj/sakawma_(ohnphwa).pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook စိန်ဝင်စိန်-ဘင်လာဒင်ရှာပုံတော်
http://www.mediafire.com/?r7b5brt2r9blkb8Posted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook နယသာဂရ ပဋ္ဌာန်းတရားတော် - စိန်လင်း (ခွဲစိတ်နှင့် ကင်ဆာပါရဂူ)
http://www.mediafire.com/download/lold797x34b66qv/seinlin.pdfPosted 11 months, 1 week agoView this post on Facebook Online Game, News for world of warcraft, Japan Manga and anime download. MTV Music video, Channel Kpop singer artists. Free Games - Download Full Version Free PC Games. All Free Game Downloads are Trusted and Safe. No Trials. No Payments.
Developed by myanmarjournaldownload.com . MySQL: 0.0030 s,0request(s), PHP: 0.2118 s, total: 0.2148 s, document retrieved from cache.